ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှုန်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျေနပ်မှုနိမ့်ကျမှုအကြားဆက်နွယ်မှုကလား။ အင်္ဂလန်နှင့်ဂျာမနီမှရလဒ်များ (၂၀၁၇) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်အောက်ပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု Curvilinear ကြားဆက်ဆံရေးရှိပါသလား? အင်္ဂလန်နှင့်ဂျာမနီ (2017) မှစ. ရလဒ်များ
J ကိုလိင် Res ။ 2017 ဇူလိုင် 28: 1-7 ။ Doi: 10.1080 / 00224499.2017.1347912 ။
Wright PJ1, Steffen NJ2, နေရောင်ကို C2.
ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများ အသုံးပြု. အများအပြားလေ့လာမှုများညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဒီအသင်းအဖွဲ့များ၏ဆွေးနွေးချက်များမီဒီယာဆိုးကျိုးများပညာရှင်များအသုံးပြုသောဘာသာစကားကျေနပ်မှုလျှော့ချထားတဲ့မျှော်လင့်ဆိုလိုအဓိကအားခဏခဏမဖြစ်ပျက်သော-စားသုံးမှုမကြာခဏ-သော်လည်းမမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, သို့သော်, Linear ယူဆခဲ့ကြသည်။ linear ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏ကြိမ်နှုန်းစီတိုးမြှင့်များအတွက်လိင်ကိစ္စကျေနပ်မှုအတွက် correspondingly ညီမျှကျဆင်းခြင်းရှိကွောငျး presuppose လေ့လာဆန်းစစ်။ ပစ္စုပ္ပန်အကျဉ်းအစီရင်ခံစာအသင်းအဖွဲ့ curvilinear ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေစူးစမ်း။ လိင်ကွဲအရွယ်ရောက်သူနှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများ, ဂျာမနီမှာအင်္ဂလန်တွင်ကောက်ယူတစ်ဦးနှင့်အခြားအနေဖြင့်စစ်တမ်းဒေတာ, အလုပ်ခံခဲ့ရသည်။
ရလဒ်များအသီးအသီးနိုင်ငံတွင်အပြိုင်ခဲ့ကြသည်နှင့်ကျား, မများကတည်းဖြတ်မခံခဲ့ရပါ။ quadratic ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့အများစုအနုတ်လက္ခဏာ, ခွက်အောက်ဖက်ကွေး၏ပုံစံအတွက်တစ်ဦး curvilinear ဆက်ဆံရေးမျိုးညွှန်ပြ။ ရိုးရှင်းသောဆင်ခြေလျှောစားသုံးမှု၏ကြိမ်နှုန်းတစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်ရောက်ရှိလာသောအခါ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကိုလျော့ချဖို့အစပြုလျက်, ကျဆင်းခြင်း၏ပြင်းအားစားသုံးမှု၏ကြိမ်နှုန်းစီတိုးမြှင့်နှင့်အတူပိုကြီးဖြစ်လာကြောင်းကိုအကြံပြုလေ့လာဆန်းစစ်။ အလုပ်အတွက်အချက်အလက်များ၏စူးစမ်းသဘောသဘာဝဆိုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အခြမရှိချေ။ တစ်ဦးအပေါ်သက်ရောက်မှုများရှုထောင့်မွေးစားခဲ့လျှင်သို့သော်ဤရလဒ်များကိုညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအနိမ့်နှုန်းထားများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုပေါ်နှင့်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများစားသုံးမှုအချို့အကြိမ်ရေရောက်ရှိပြီးမှသာအစပျိုးမသက်ရောက်မှုရှိသည်အကြံပြုလိမ့်မယ်။